दुखद् खबर, एक्कासी काठमाडौंँको आकाश ड’रलाग्दो भयो ! घर बाहिर ननिस्किन सरकारको अपिल !Kathmandu (जानकारीका लागि सेयर गराै) | Public 24Khabar
Home News दुखद् खबर, एक्कासी काठमाडौंँको आकाश ड’रलाग्दो भयो ! घर बाहिर ननिस्किन सरकारको...
दुखद् खबर, एक्कासी काठमाडौंँको आकाश ड’रलाग्दो भयो ! घर बाहिर ननिस्किन सरकारको अपिल !Kathmandu (जानकारीका लागि सेयर गराै)
दुखद् खबर, एक्कासी काठमाडौंँको आकाश ड’रलाग्दो भयो ! घर बाहिर ननिस्किन सरकारको अपिल !Kathmandu
पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो बढ्दै गएका बेला नेकपा एमालेको माधव पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठकमा जाने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह सहभागी हुने या नहुनेबारे चासो रहेको छ ।एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको नेपाल समूहले विगतका केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक बहिष्कार गर्दै आएको थियो ।
तर, ओलीले कठोर निर्णय लिने थाहा पाएको उक्त पक्ष अब बैठकमा भने सहभागिता जनाउने बुझिएको छ । माधव नेपाल निकट सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले बैठकमा सहभागी हुने बताए ।उनले पत्रकारसँग कुरा गर्दै आफूहरु संसदीय मूल्य मान्यता अनुरुप चल्ने भएकाले बैठकमा सहभागी हुने जानकारी दिए । पाण्डेले कुनै हालतमा एमाले फुटाउन नलागेको प्रष्ट पारे । एकताको पक्षमा उभिएर सशक्त रुपमा संघर्ष गर्ने समेत बताए । यसअघि नेता माधव नेपालले आफू पक्षका कार्यकर्तालाई नआत्तिन र धैर्य गर्न भनेका थिए ।
उनले ओलीलाई परास्त गरेरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय माधव नेपाल निक्कै कमजोर हुँदै गएका छन् । एमाले केन्द्रिय सदस्य र सांसदहरु ओलीतिर जान थालेपछि माधव नेपाल समुह के गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेको छ । नेकपाको औपचारिक बिभाजनपछि केपी ओली तिर भन्दा माधव पक्ष प्रचण्डतिर नजिक रहेको पाइएको छ । उनीहरु केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लागि परेका छन् ।
Previous articleउप’चार कै क्रममा कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशीको नि*धन
Next articleराउटे समुदाय को बस्तीबाट भाईरल सम्झना शाही को म्युजिक भिडियो सुटिङ (भिडियो हेर्नुहोस)